GARBAHAAREEY ONLINE » GUUL IYO GOBANIMO:- Waxaa la dhameestiray Isbitalka Jaalle Siyaad ee Magaalada Garbahaareey “DAAWO” Guul Taarikhi Ah
GUUL IYO GOBANIMO:- Waxaa la dhameestiray Isbitalka Jaalle Siyaad ee Magaalada Garbahaareey “DAAWO” Guul Taarikhi Ah
Feb 28, 2016 - 5 Jawaabood
Post Views = 2241
Waxaan u Mahadcelinayaa cid walba oo gacan ka geystay dib-u-dhis lagu sameeyay Isbitaalka guud Magaalada Garbahaarey ee loogu magac darey Aabihii Ummadda Soomaaliyeed ahna Madaxweynihii hore ee Xukuumaddii Kacaanka Marxuum Jaalle Siyaad General Hospital oo isaguna ku aasan Caassimadda Gedo ee Garbahaareey.
Dib-u-dhiska Hospital-kan oo qaatay muddo laba sano ah, ayaa waxaa ku baxay qarash gaaraaya laba boqol oo kun oo dollar-ka Mareykanka ah ($200,000), sida ay sheegeen maamulka gacanta ku haya, waxaana gacan ka gaystay jaaliyadaha qurbo-joogta ee ka soo jeeda deegaanka iyo bulshada Somaliyeed, kuwooda Horumarka dalkooda jecel.
Inkastoo dhismaha Isbitaalkan la dhameeyay, hadana waxaa uu u baahan yahay qalabkii uu ku hawlgeli lahaa, si uu u haqabtiro baahida caafimaadka bulshada Gobolka.
Waxaa xaqiiqo ah in dadkeenu yahay dad wax-qabad oo horumarka iyo hawlaha deegaanadooda hanan kara, waxaan ugu baaqayaa dhamman ummadda Somaliyeed in la isku tashado oo maalgelinta aadanaha gaar ahaan caafimaadka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waxaan oran lahaa, hey’adaha kaalmada bini’aadminimada bixiya iyo intii wanaagga jecel inay si deeqsinimo leh u taageeraan mashruucan dhamaystirkiisa. Cid kasta oo mashruucan wax tarta, abaalkoodu ma dhumi doono insha allah ee wuxuu ku xardhanaan doonaa Maskaxdeena.